Asenkingeni 'amavila' eNFP | Isolezwe
Asenkingeni 'amavila' eNFP
Izindaba / 17 July 2017, 09:43am / MLUNGISI GUMEDE
UMENGAMELI weNFP uNkk Zanele Magwaza-Msibi osethathe isinqumo sokubhalela ikomiti elibheka ukusebenza kwamalungu ePhalamende ukuze kucutshungulwe ukusebenza kwamalungu abo ngoba ekhala ngokuthi akaneme ngomsebenzi wawo
IZEMBE liloliwe kumalungu eNFP ayimele ePhalamende nasesiShayamthetho saKwaZulu-Natal, ngemuva kokuthi uMengameli wayo, uNkk Zanele Magwaza-Msibi ebhalele ikomiti elicubungula ukusebenza kwawo, wazwakalisa ukungenami ngomsebenzi wawo.
Ethula inkulumo yakhe efundwe yilungu lesiShayamthetho saKwaZulu-Natal uMnuz Ericsson Zungu oThukela, ngoMgqibelo, uNkk Magwaza-Msibi, uthe ufuna ilungu ngalinye lichaze ukuthi selenzeni kusukela lingene ePhalamende.
“Kubi futhi kulihlazo lokhu okwenzekayo kokuthi iNFP ingezwakali nhlobo ePhalamende likazwelonke nasesiShayamthetho. Sifana nabantu abangekho. Sidlulwa nangamaqembu amelwe abantu ababili o-UDM noCope, thina sibe siyisithupha. Senza sengathi asihlali ezindaweni lapho abantu besabhekene khona nenkinga yobubha, ukuswelakala kwamathuba emisebenzi, ukuhamba ngonyawo lonwabo kokulethwa kwezidingo-ngqangi nentuthuko,” kusho uNkk Magwaza-Msibi.
Uthe amalungu abo ayengayele ePhalamende nasesiShayamthetho ukuyoshisisa izihlalo.
“Ngizolindela futhi nokuthi abasemaPhalamende basilethele umbiko ophelele wokusebenza kwabo ezifundazweni abatshalwe kuzo. Phela siyakhokhelwa ngomsebenzi esiwenzayo,” kusho uNkk Magwaza-Msibi.
I-NFP inamalungu ayisithupha ePhalamende likazwelonke nayisithupha esiShayamthetho saKwaZulu-Natal.
UNkk Magwaza-Msibi unxuse amalungu enhlangano ukuba asebenze kanzima ukwenza isiqiniseko sokuthi iqembu liyavuka liyazithuntutha.
Uthe yena uyohlale echemile nanoma iliphi ilungu lenhlangano elibeka phambili iqembu.
“Ngiyazi ukuthi ukugula kwami kulibulele iqembu yingakho sizithola sibhekene nalolu taku esikulo njengamanje. Kodwa nginethemba lokuthi ngokubambisana sizosiguqula isimo, asisukume sisebenze kusemanje ngoba u-2019 ususemnyango. Ngakho kumele usifice sesimi ngomumo,” kusho uNkk Magwaza-Msibi.
Uthe izinkinga ezibhekene namanye amaqembu ezombusazwe njengamanje zimenza akholwe ukuthi basanalo ithuba lokwenza kangcono.
“Kodwa lokho ngeke kuzenzakalele, kuzodinga ukuthi sibhukule. Kuzosiphoqa ukuba sithathe izinqumo ezinzima. Kuzosiphoqa ukuthi sigwinye itshe, sibekezele noma sithukwa,” kusho uNkk Magwza-Msibi, wengeza ngokuthi unethemba lokuthi ngoDisemba bazoba nayo ingqungquthela yabo yokukhetha ubuholi obusha.